Londres tsara indrindra any Londona
Eoropa England London
6 ao amin'ny The Theater Pub tsara indrindra any Londres
Tsy mety ve ny manapa-kevitra ny amin'ny alina iray ao amin'ny kafe na ny takarivan'ny kolontsaina? Mampiasà fitsangatsanganana mankany amin'ny iray amin'ireo lahatsary ao amin'ny londresin'i Londres izay ahafahanao mijery milalao mipetaka amin'ny pintana amin'ny tanana. Miaraka amin'ny ankamaroan'ny tapakila mandeha latsaky ny £ 20, dia fomba tsara hahazoana tsiro ny kianjan'ny teatra ao Londres tsy hikolokolo ny toeram-ponenana midadasika any Andrefana. Ary mety ho hitanao ny zava-dehibe manaraka ao anatin'ilay dingana. Kintan'ny Hollywood maro sy ny talen'ny Olivier Award, izay nandresy, no nanapaka ny nifiny tao amin'ny teatra nanerana an'i Londres. Jereo ny fakana ny toerana tsara indrindra.
Niorina tamin'ny taona 1970 ny teatra voalohany tao amin'ny Theater Pub nanomboka tamin'ny andron'i Shakespeare, ny Head's Head Pub ao amin'ny King Street Islington dia ny toeran'ny lozam-pifamoivoizana any Londres ary milalao tantara an-tsehatra, mozika ary fampisehoana an-tsehatra. Ny kintan'i Alan Rickman, i Sir Ben Kingsley sy Richard E Grant dia samy nanatontosa avokoa ny ankolafy rehetra ary maro ireo mpilalao no namoaka olo-malaza Olivier Awards ary nanohy nifindra tany amin'ny Farihy Andrefana sy Broadway. Ny teatra dia miorina any ambadiky ny tranokely Victoriana iray, toerana malalaka miaraka amin'ny baraingo nentim-paharazana sy ny afo midedadeda. Ny baoritra dia mangeja ny mazava sy ny karazana zava-manan'aina, ny labiera vita amin'ny varotra ary ny fifantenana ny divay.
Liona Old Red Lion
Ity toeram-pamokarana kely misy eo amin'i Islington sy Clerkenwell dia voalaza hatramin'ny taona 1415 ary afaka manisa an'i Charles Dickens, George Orwell, Karl Marx sy i Stalin ho patrons taloha. Niorina teo amin'ny tanin'ny Priory an'ny The Knights of St. John izy io ary taloha dia nalaza tany amin'ny iray amin'ireo làlana lehibe indrindra tao amin'ny Tanànan'i Londres. Ny trano fivarotana ny fianakaviana dia manamboatra ny ala sy ny tavoahangy avy amin'ny Pieminister ary misy zaridaina biriky maniry any ivelany. Ny toeram-piompiana an-trano ambony dia nanokatra ny varavarany tamin'ny taona 1979 ary ny toerana kely dia manana seza amboaran'ny olona manodidina ny 60. Maro amin'ireo kilalao aseho eto dia nafindra tany amin'ny Farany Andrefana ary afaka manisa tapakila fandoavam-bola avy amin'ny £ 10 monja.
Ity mozika Victorian taloha teo aloha ity dia nankasitraka an'i Charlie Chaplin teo amin'ny lampihazo ary mbola manintona ireo mpilalao ambony indrindra mba hijery kintana, gigs, hetsika kômika ary alina be. Amin'ny lakandranon'i Regent eo anelanelan'i Islington sy Shoreditch, ny tranokalan'ny sampan'i Rosemary dia tranokala eo an-toerana izay mipetraka manodidina ny 70 eo amin'ny toerana malalaka eo ambonin'ny pub. Ny bar dia manolotra biriky eo an-toerana sy sakafo isan-karazany, toy ny trondro britanika malaza toy ny trondro sy ny chips ary ny sakafo hariva. Ankoatra ny fandaharam-pampianarana tantara an-tsehatra dia misy fitsikerana andrana isan-kerinandro sy mozika mozika tsy tapaka.
Ambony ao amin'ny The Gatehouse
Ao amin'ny Village Highgate tsara tarehy, nanomboka ny fiainana ny trano fivarotana Gatehouse ho trano mozika Victoriana. Io no iray amin'ireo toerana fialan-tsasatra malaza indrindra ao Londres izay malaza amin'ny fametrahana tsangambato madinidinika amin'ireo fampisehoana malaza any amin'ny Andrefana. Nahazo loka ho an'ireo tia an'i Avenue Q sy Mousetrap izy ary nahazo fitarainana mivaivay noho ny famokarana vehivavy Hamlet rehetra. Ny seza dia mihoatra ny 100 ary mipetraka ambony ambony gastropub izay manandanja amin'ny sakafo espaniola sy tapas dishes. Manararaotra ny sakafo matsiro tsara indrindra eo amin'ny toeram-pisakafoanana sy divay alohan'ny fampisehoana sy famandrihan-tsakafo mialoha ny filany mba hankafizanao ao amin'ny zaridaina biriky.
Toeram-piandrasana vavahadin'i Notting Hill
Ambonin'ny printsy Albert Pub ao amin'ny vavahadin'i Notting Hill, ny Theater Theater dia nahazo marika an-tsarimihetsika lamaody malaza nanomboka tamin'ny nanokafana tamin'ny 1979 ary nahita kintana toa ny Jude Law, Rachel Weisz sy Sophie Okonedo dia nandroso ny sehatra. Ny fandaharam-pampianaran'ny teatra dia natokana amin'ny tantara iraisam-pirenena sy ny vokatra ateraky ny famokarana ary misy atrikasa, fifanakalozan-kevitra ary zava-mitranga manokana ho an'ireo tanora (tandremo tsara ao amin'ny bilaogy ho lisitra). Ny kafe dia kanto sy manintona ary manasongadina zaridaina biriky ao an-tokantrano ho an'ny zava-pisotro misy alikaola sy pub grub.
Larger and comfier than most of the theater's traditional pub london, the Tabard Theater is a beautiful place above a historic Pub in Chiswick. Ity toerana andrefan'i Londres ity dia nisokatra tamin'ny 1985 ho tantara an-tsehatra 96-seza ary izy dia mitahiry ny famokarana an-tariby, mozika, fanavaozana amin'izao fotoana ary fampisehoana comedy. Ny tranokala malaza dia natsangana tamin'ny taona 1880 ary manasongadina ny antsipiriany amin'ny endriny toy ny tapa-kazo sy ny fitaratra sy ny zavakanto. Misy ny menom-pisiana miovaova ales ary mifantina karazan-tsakafo eo an-toerana miaraka amin'ny saran-dalana britanika britanika. Maka seza ao amin'ny efitra famakiam-boky na hivoaka ivelan'ny zaridaina biriky.
Mandeha avy any Londres mankany Windsor Castle amin'ny Bus, Train na Car
Sary: Mitsidiha ny Ejipsin'i London
Sekolin'ny Rococo Chocolate
Ny fiarandalamby tsara indrindra any London
The 9 Best Hotels in Londona 2018
Savini ao amin'ny Criterion Tea Tea Review
Jamaica Nude Beaches sy Fivarotana akanjo
4 Toerana Tsara Hijery Ny Faha-4 Jolay Ny Fireworks Ny Volana Jolay any Manhattan
Ny zavatra tokony ho fantatra momba Tres Fronteras ao Colombia
Zava-pifamoahana 10 hiditra ao an-toerana sy any Anchorage
Sitka - Renivohitr'i Alaska
Afaka Hahita Ny Tuberculosis Amin'ny Dia ny Dia Trippy Aho?
Wade Oval alarobia
Momba ny Golf sy ny Golf ho any Bermudes
Maine Fall Driving Tour: Portland ho an'ny Farihy Lake Rangeley
Ny toetry ny toetrandro any avaratr'i Shina
Top 20 Fianakaviana fiaramanidina any Amerika Avaratra
Free or Paid? Wi-Fi ao amin'ny Air 20 International Airport
Ilay Durian-n'i Duria tsy mendrika